BESALAMPY : Vehivavy iray sy ny zanany norasarasain’ny jiolahy tamin’ny antsy
Nitrangana fanafihan-jiolahy tany amin’ny Kaominina ambanivohitra Ambatolahy, Distrikan’i Besalampy. 8 juillet 2020
Maty tamin’izany ny tovolahy iray ary naratra mafy ny reniny. Tamin’ny fomba feno habibiana no namonoan’ny jiolahy ny renim-pianakaviana iray sy ny zanany lahy. Norasarasaina tamin’ny antsy izy mianaka ka maty tamin’izany ilay tovolahy. Tany amin’ny Kaominina Ambanivohitra Ambatolahy, Distrikan’i Besalampy no nitrangan’izany ny alin’ny alahady hifoha alatsinainy teo. Araka ny vaovao voaray dia efa-dahy nirongo antsy lava sy hazo no nanafika tao amin’io tokantrano iray io. Taitra ireo mpianakavy tao vantany vao tafiditra ireo efa-dahy.
Raikitra ny fifanjevoana ka avy hatrany dia nofirain’ireto farany tamin’ny antsy teo amin’ny lohany avy izy mianaka ireo. Tsy nahazo na inona na inona tao ireo mpanafika fa nitsoaka taorian’ny fifanoherana. Niezaka nanenjika ireo jiolahy ny fokonolona teo amin’ny manodidina fa tsy hita popoka izy ireo. Nentina tany amin’ny hopitaly izy mianaka naratra. Tsy tana ny ain’ilay tovolahy noho ny fahaverezan-dra be loatra taminy.
Ahiana mafy kosa ny fahasalaman’ilay ramatoa reniny. Efa eo am-pelatanan’ny mpitandro filaminana any an-toerana ny raharaha amin’ny fikarohana ireo andian-jiolahy. Mahazo vahana indray ny tsy fandriampahalemana any an-toerana. Miseho lany ny halatra omby sy fanafihana tokantrano sy ny fanakanan-dalana. Mampahazo vahana ny asan-dahalo ny faharatsian’ny lalana amin’iny Faritra Melaky iny. Manampy trotraka izany ny tsy fahampian’ny mpitandro filaminana miasa any an-toerana. Tsy misy ny fampandrosoana amin’ireo Distrika mandrakotra io Faritra io ka manaitra ny mpitondra izy ireo mba hijery ifotony ny zava-misy iainan’ireo mponina any an-toerana.